Maxkamada kutaala Nairobi oo amar ku bixisay in la soo xiro Agaasimaha gudiga bixiya lacagaha howlgabka ah – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada kutaala Nairobi oo amar ku bixisay in la soo xiro Agaasimaha gudiga bixiya lacagaha howlgabka ah
Maxkamad kutaalo Magaaladatan Nairobi ayaa amar ku bixisay in la soo xiro islamarkaana xabsiga la dhigo agaasimaha gudiga bixiyaha lacagaha howlgabka ah Shem Nyakutu.
Amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii bartamihii bishii aynu soo dhaafnay maxkamad kutaala Nakuru ay ku amartay mas’ulkaasi in uu fasaxo lacago lagu sheegay in ay yihin 1.5 milyan oo kamid ah 42.5 Bilyan oo ay doonayaan macalimiinta shaqadooda howlgabka ka noqday.
Amarkaas oo ay bixisay xaakiinada maxkamadaasi Junnet Mulwa ayaa daba socday iyadoo xiligaasi uu maxkamada hortagnaa Mr Shemn waxaa uuna xaakinada maxkamada u sheegay in lacagahaasi ay soo gaareen xafiskiisa oo uu ku guda jiro qaban qabadii uu ku bixin lahaa.
Waa markii labaad oo agaasimahaasi loo soo qoro warqadihii lagu xiri lahaa maadama 26-kii bishi july ee sanadkan sidan oo kale ciidamada booliska lagu amray In ninkaas ay soo qaabtaan taas oo timid kadib markii uu kasoo hormuuqan waayay maxkamada si uu uga jawaabo dacwadaha lagu soo eedeynayo oo ah in barayaal gaaray 52,000 uusan u fasixin lacagihii howlgabka ahaa.
Mr Nyakatu ayaa markii ugu dambeysay oo uu soo hor istaago maxkamada kutaalo nakuru u sheegay in xafiskiisa uu wasaarada maaliyada ka helay lacag dhan 1.5 bilyan 25-kii bishii June uuna lacagtaasi ku shubi doono sanduqyada macalimiinta ay ku leeyihiin bangiyada muddo aan ka badneyn 3 isbuuc.
Maadama ilaa hadda uusan fasixin lacagaha ayaa waxa lagu amray taliyaha ciidamada booliska dalka Joseph Boinett in uu soo xiri agaasimahaasi maadama uu ku guuldarestay in uu adeeco amarka maxkamada islamarkaana uu lacagihii ay xaqa u lahaayen macalimiinta howlgabka ah ay bixinin.
← Xisbiga Merkel oo ay guul daro soo gaartay
Dowlada dalka oo ku andacooneysa in dacwada badda aysan xaq u laheen in ay qaado maxkamada ICC-da →